Sonos Roam, စျေးနှုန်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ | Gadget သတင်း
Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | 06/04/2021 15:00 | ယေဘုယျ, reviews
အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မိုဘိုင်းဖုန်းအကြောင်းပြောသောအခါအသံလှိုင်းအစားထိုးမှုများပိုမိုများပြားလာသည်။ ၎င်းသည်ရေကူးကန်သို့ဆင်းသွားခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်စပီကာနှင့်အတူဘာဘီကျူးတစ်ခုသို့သွားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့လည်ခင်းတွင်အသက်ဝင်စေရန်၎င်းအားသာချက်ကိုအသုံးမပြုခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်တယ် Sonos သည်လှုပ်ရှားမှု၏အောင်မြင်မှုကိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် ပြီးတော့အဲဒါကိုသေးငယ်ပြီးဆွဲဆောင်ချင်လာတယ်။
၎င်းကို၏အင်္ဂါရပ်များနှင့် Sonos ကဘာကြောင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်သောစပီကာများ၏ရာဇပလ္လင်ကိုအဘယ်ကြောင့်တောင်းဆိုနေသည်ကိုငါတို့နှင့်အတူရှာဖွေပါ။
အခြားဖြစ်ရပ်များစွာ၌ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ချန်နယ်ရှိဗီဒီယိုတစ်ခုနှင့်အတူလိုက်ပါရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် unboxing အပြည့်အစုံကိုသင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်။ setup ခြေလှမ်းများနှင့်အသံစမ်းသပ်မှုများကဲ့သို့အချို့သောအခြားအေးမြ features တွေ။ သင်၏ရုပ်သံလိုင်းကိုသွားပြီး Actualidad Gadget အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ထိုအခါမှသာသင့်အားအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာများကိုယူဆောင်လာပြီးသင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်အကွက်သည်သင်၏မေးခွန်းအားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ သင်ဒါကိုကြိုက်လား? သင် Sonos Roam တွင် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီနည်းကို Link.
1 ပစ္စည်းများနှင့်ဒီဇိုင်း: Sonos အတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏
3 အလိုအလျောက် TruePlay နှင့် Sonos လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်
ပစ္စည်းများနှင့်ဒီဇိုင်း: Sonos အတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏
မြောက်အမေရိကကုမ္ပဏီသည်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားဖြင့်ပစ္စည်းများကိုတီထွင်နိုင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင် Sonos Roam သည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Sonos Arc ကိုကျွန်ုပ်တို့အားမလွှဲမရှောင်သတိရစေသည်။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီ။ ထို့အပြင်ရိုးသားခြင်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဤဒီဇိုင်း၏သေးငယ်သောမိတ္တူတစ်ခုနှင့်တူပြီးချီးမွမ်းမှုများစွာကကုမ္ပဏီအတွက်အကျိုးရှိစေသည်။ ၎င်းသည်အတော်လေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအရွယ်အစားနှင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများရှိပြီးထူးခြားသောကိုယ်ထည်ဖြင့်ခံနိုင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားစေရန်အတွက်နိုင်လွန်ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အဖြူနှင့်အနက်ရောင်နှစ်ခုလုံးကိုအရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ရှုထောင့်: 168 × 62 × 60 မီလီမီတာ
အလေးချိန်: 460 ဂရမ်
သိသာထင်ရှားသည့်အချက်မှာ၎င်းသည်ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုမရှိသောစပီကာတွင်ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်ရှိမည်မဟုတ်ချေ။ အသံထုတ်ကုန်များတွင်အလွန်အမင်းပေါ့ပါးခြင်းသည်များသောအားဖြင့်အသံအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ IP67 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပါသော Sonos Roam တွင်၎င်းသည်ရေစိုခံသည်။ ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍ မိနစ် ၃၀ အထိရေထဲတွင်တစ်မီတာအနက်ထိနစ်မြှုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဝေါဟာရများကိုသိသာထင်ရှားသည့်အကြောင်းပြချက်များဖြင့်စစ်ဆေး။ မရပါ Sonos Move သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိအမှတ်ပြုသည်။
အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်ဖြစ်ပျက်နေသကဲ့သို့ Sonos မှအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုလွှတ်တင်လိုက်သည် ဝိုင်ဖိုင်, ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်မည်သည့် router နှင့်မဆိုသွယ်ဝိုက်သောကွန်ရက်ကဒ်တစ်ခုပါဝင်သည် 802.11 ခ / g / n / ac 2,4 သို့မဟုတ်5GHz ကြိုးမဲ့ကစားနိုင်စွမ်းနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်5GHz ကွန်ယက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ရန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ စပီကာများစွာသည်သဟဇာတမဖြစ်၊ ဤ Sonos Roam တွင်၎င်းမှာမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် Sonos သည်စပီကာ၏ပုံသဏ္inာန်ရှိသောကွန်ပျူတာသေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုမမေ့သင့်ပါ 1,4 GHz quad-core CPU သည် A-53 ဗိသုကာဖြစ်သည် အဲဒါကမှတ်ဉာဏ်ကိုသုံးတယ် 1GB SDRAM နှင့် 4GB NV ။
အမေဇုံ Alexa လိုက်ဖက်တဲ့
Apple HomeKit သဟဇာတ
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစေသည် Sonos ကျင်လည်သည် အလှည့်၌ရှိကြောင်းလွတ်လပ်သော device ကို ဘလူးတုသ် ၅.၀ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအိမ်မှဝေးရာသို့ပို့ဆောင်သောအချိန်လေးများအတွက်နှင့်ဤ Sonos Roam သည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အရာများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒီအပြင်ငါတို့လည်းရှိသည်လိမ့်မယ် Apple AirPlay2၎င်းသည် Cupertino ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်စေသည် Apple က HomeKit အလွယ်ကူဆုံးနည်းဖြင့် multiroom ဖြစ်ရပ်များဖန်တီးရန်လာသောအခါ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုခံစားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ် Spotify ဆက်သွယ်မှု၊ Apple Music, Deezer နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
အလိုအလျောက် TruePlay နှင့် Sonos လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်
Sonos Roam ၏ထပ်ဆောင်းတန်ဖိုးသည်အထက်ပါဖော်ပြချက်များသာမကဘဲ၊ စျေးကွက်ထဲတွင်စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သော Sonos ဖြစ်သောကြောင့်ဆန့်ကျင်မှုရှိပုံရသော်လည်း၎င်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်နှစ်ရပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။ ။ Sonos လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်မှစတင်သည်။ Wi-Fi နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၊ Roam ရှိ play / pause ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကိုင်ထားပါကစပီကာသည်သင်၏ကွန်ယက်ရှိအခြား Sonos စပီကာများကို ultrasonic ကြိမ်နှုန်းအသံထုတ်လွှတ်ပေးလိမ့်မည်။ Music ကို Sonos Roam မှစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအနီးဆုံးစပီကာသို့ပြောင်းပေးလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့အခု TruePlay အကြောင်းပြောနေတာပါTruePlay သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်တိုင်းအကောင်းဆုံးအသံရရှိရန်ခွင့်ပြုသည့် Sonos ကိရိယာပတ်ဝန်းကျင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစနစ်ဖြစ်သည်ကိုသင်အများသိကြသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ Sonos TruePlay သည် Bluetooth မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အချိန်တွင် Sonos TruePlay သည်အကောင်းဆုံးသောအသံများကိုအမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေကြောင်းအာမခံသောအော်တိုလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အခုဗုံကိုသွားမယ် mAh တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တွင် 15W USB-C port (adapter မပါ ၀ င်ပါ) နှင့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းပံ့ပိုးမှု Qi ဘယ် charger ကိုမဆို ၄၉ ယူရိုနဲ့သီးခြားဝယ်ရမှာပါ။ Sonos က ၁၀ နာရီပြန်ဖွင့်မည်ဟုကတိပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများတွင်အသံလက်ထောက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအသံပမာဏ ၇၀% ကျော်နေသမျှကာလပတ်လုံးခန့်မှန်းထားသည်။ ၎င်းကိုအားသွင်းရန်အတွက် USB-port မှတဆင့်တစ်နာရီခန့်ကြာလိမ့်မည်။ Qi charger ကိုစမ်းသပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
dual-Class ကို H ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်အသံချဲ့စက်
အသံအရည်အသွေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းကို Ultimate Ears Boom3သို့မဟုတ် JBL စပီကာကဲ့သို့သောကျန်ထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်းလင်းသောသာလွန်ကောင်းမွန်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုတွေ့ရှိသည်။ ဟုတ်ကဲ့ OK ငါတို့မှာဆူညံသံ ၈၅% အထက်ရှိတယ်။ ထုတ်ကုန်၏အရွယ်အစားကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏အရည်အသွေးသည်အလွန်မြင့်မားသကဲ့သို့၊ အောက်ခြေကိုအထူးသဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြသည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းရဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွန်တော်အံ့သြသွားတယ်။ ဤအရာအားလုံးသည်စျေးကွက်အတွင်းယူရို ၁၇၉ ဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးနှင့်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောစပီကာကိုဖြစ်စေသည်။, နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်အကျွံဖြစ်သည့်စျေးနှုန်းထောက်ခံပါဘူးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်။
အပေါ်တင်ခဲ့သည်:6ဧပြီလ 2021
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်:3ဧပြီလ 2021
Spotify Connect နှင့် Sonos S2 ၏အခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများ
Alexa, Google Home နှင့် AirPlay2နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
ပါဝါ adapter မပါဝင်ပါဘူး
Qi charger မပါဝင်ပါဘူး
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Sonos Roam သေးသော်လည်းပြင်းထန်သော [ပြန်လည်သုံးသပ်]
TCL TS6110၊ Dolby Audio ဖြင့်အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံတည်ဆောက်ရန်စျေးပေါသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်